गलापागोसलाई सही गर्दै
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » इक्वेडर ब्रेकिंग न्यूज » गलापागोसलाई सही गर्दै
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • cruising • संस्कृति • इक्वेडर ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • जिम्मेवार • पर्यटन • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • अहिले प्रचलनमा
फेब्रुअरी 21, 2018
लोकप्रियता मा प्रत्येक वर्ष बढ्दै, गालापागोस टापु एक उच्च-खोज-पछि छुट्टी गन्तव्य हो। यो विश्वको सबैभन्दा नाजुक ईकोसिस्टम पनि हो।
इक्वेडरको तटमा रहेको यस द्वीपसमूहको अपीललाई सुनको अण्डा पार्ने हंससँग तुलना गर्न सकिन्छ। धेरै लोकप्रिय बन्ने, टड स्मिथले भने, एडभेन्चरस्मिथ एक्सप्लोरिसका संस्थापक र अध्यक्ष, यो युनेस्को विश्व विरासत साइटको पर्यटन र पूर्वाधारमा अनियन्त्रित वृद्धि जोखिमको अर्थ हो।
"यसले चराहरुको जीवन, वनस्पति र जuna्गली जनावरहरुलाई समर्थन गर्ने धेरै पारिस्थितिकी प्रणालहरु लाई खेर जान सक्छ," उनले भने।
तल गालापागोस कसरी गर्ने भन्ने बारे दिशानिर्देशहरू छन्।
- सानो जहाज (१२ देखि १०० पाहुनाहरू) द्वारा जानुहोस्। साना जहाजहरू गलापागोस टापुको बिदाको केन्द्रमा छन्। पक्षी र वन्यजन्तुहरूको साक्षीहरू तिनीहरूको अनचेन्चेल्ड टापुको वातावरणमा साना जहाज द्वारा उत्तम पहुँच गरिन्छ। किन? १ major प्रमुख टापुहरूको साथ ,12,००० भन्दा बढी वर्ग मील ढाक्ने, गालापागोस द्वीपसमूह तपाईंको सोचाइभन्दा ठूलो छ, र धेरै आगन्तुक साइटहरू पानी द्वारा मात्र पहुँच योग्य छन्। प्रत्येक रात जहाजमा सुत्नाले विस्तृत खोजीको लागि अनुमति दिन्छ किनकि तपाईंले डु evening्गामार्फत दिनको यात्रा पछि प्रत्येक साँझ जग्गा-आधारित आवासमा यात्रा गर्नुपर्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय गालापागोस टूर अपरेटर्स एसोसिएसन (आईजीटीओए) ले रिपोर्ट गरेको छ कि गत दशकमा गलापागोस पर्यटनको १०० प्रतिशत वृद्धि भूमिमा आधारित पर्यटनबाट आएको थियो जब जहाजमा आधारित पर्यटन घटेको थियो।
आईजीटीओए बोर्डमा सेवा गर्ने स्मिथले भने, “गलापागोसमा जहाज आधारित यात्रा अतिथीको अनुभवलाई अधिकतम बनाउन र टापुहरूमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न धेरै नियमन गरिन्छ। भूमि पर्यटन हाल कम विनियोजित छ, र यो IGTOA, युनेस्को र अन्य संरक्षण समूहहरु को एक जहाज मा आधारित द्वीप वृद्धि मा ध्यानपूर्वक जहाज आधारित पर्यटन भएको छ।
- सकेसम्म लामो रहनुहोस्। द्वीपसमूहमा आफूलाई अधिक समय दिएर तपाईं सम्भवतः सबैभन्दा बढी वन्यजन्तुहरूको सामना गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र टापुहरूको फराकिलो दायरा हेर्नुहोस्। टापुहरू बीचको सूक्ष्म पर्यावरणीय भिन्नताहरू बुझ्नको लागि अधिक समय दिंदा अनुभव बृद्धि हुन्छ र कम वायुसेवा उडानहरू भित्र र बाहिरका साथ संरक्षणलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। वायु ट्राफिक र बढेको कार्गो ढुवानी युनेस्कोले २०१ 2016 को गलापागोस टापुको संरक्षण प्रतिवेदनमा पहिचान गरेको चिन्ताको विषय हो किनकि यी नयाँ आक्रमणकारी प्रजातिहरूको आगमनका लागि प्राथमिक भेक्टरहरू हुन्।
लामो समय रहन्छ यसले सार्थक कुराकानीको लागि अधिक अवसरको साथ स्थानीय समुदायलाई मद्दत गर्दछ। "हामी कम्तिमा--रात /--दिनको क्रूज सिफारिस गर्दछौं," स्मिथले भने।
- संरक्षण प्राथमिकता बनाउनुहोस्। गालापागोस यात्राको अग्रिम समयमा, मानिसहरूलाई संरक्षण संगठनहरू र समुदायको आवश्यकताहरूको बारेमा सिक्न र उनीहरूलाई समय वा पैसा दान गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
- अगाडि योजना, एक पटक यो गर्नुहोस्। नाजुक ठाउँमा यात्रा गर्नुहोस् जस्तो गलापागोस आदर्श रूपमा एक पटक गर्नुपर्दछ, त्यसैले यो एक पटक जीवनभरको यात्राको लागि चयन प्रक्रियालाई रमाईलो बनाउनुहोस्। "उत्कृष्ट अनुभवको लागि किनमेल गर्नुहोस् र गलापागोस टापुहरूको भ्रमण गर्ने विशेषज्ञको सल्लाह लिनुहोस्," स्मिथले सल्लाह दिए। प्रारम्भिक बुकिंगले अधिक मिति र जहाज विकल्पहरू प्रदान गर्दछ, साथै विशेष अफरहरू जस्तै चाँडो-बर्ड छुट।
- स्नोर्कल! “यदि तपाईं पानीमा जानु भएन भने, तपाईं गालापागोसमा आधा वन्यजन्तु हराउनुहुन्छ,” स्मिथले भने। "रंगीन माछाको कुनै अभाव छैन, तर क्यारिज्म्याटिक मेगाफुना (चंचल समुद्री सिंह, शार्क, किरण, कछुवा), प्रागैतिहासिक देखिने समुद्री इगुआनास र भूमध्यरेखाको उत्तरमा बस्ने एक मात्र पेन्गुइनले वास्तवमा गालापागोस स्नोरकेलिंगलाई अलग गरिरहेको छ।" स्नोर्कलिंग विकल्पहरू गहिरो-पानीदेखि शुरुआती-मैत्री किनारामा स्नोर्कल्ससम्म। जो वास्तवमा स्नोर्केल गर्न चाहँदैनन्, तपाईं एक सिसा का तल डु boat्गा संग एक जहाज को लागी विकल्प गर्न सक्नुहुन्छ। "गलापागोस वन्यजन्तुसँग कुराकानी गर्दा र उनीहरूलाई निकटतामा देखाउँदा निडर जनावरहरूसँगको बन्धन जोगाउँदा संरक्षणको मन बढ्छ," स्मिथले भने।
- याद गर्नुहोस् तपाईं दक्षिण अमेरिकामा हुनुहुन्छ। यात्रामा हतार नगर्नुहोस् र इक्वेडर वा अन्य नजिकैका क्षेत्रहरू जस्तै सेक्रेड भ्याली र माचू पिचू, पेरुले प्रस्ताव राख्नु पर्ने केही चीज खोज्न नबिर्सिनुहोस्।